Ny Recipe Meatloaf tsara indrindra - Fomba Fanamboarana
lasopy spice fromazy maranitra miaraka amin'ny fromazy fanosotra
florentine akoho feno zava-maniry miaraka amin'ny fromazy fanosotra
crock poti swiss steak misy voatabia
vary maina ka hatramin'ny volan'ny vary masaka
Ny Recipe Meatloaf tsara indrindra
Ny Recipe Meatloaf INDRINDRA malefaka, be ranony ary feno tsiro. Ireto ambany ireto ny torohevitro hamoronana fahalavorariana meatloaf!
Voahandro ny hen'omby, afangaro amin'ny mofomamy ary endasina amin'ny lafatra. Izany rehetra izany dia nopetahana topa zesty (ampahany tiako indrindra)!
lafiny inona no ampiasaina amin'ny slider ham sy fromazy
Mora atao Meatloaf
Ity recette meatloaf mora ity dia feno tsiro ary tsotra ny manamboatra azy! Ampio amin'ny lafiny ankafiziko Crock Pot Mac sy Cheese ary mofo misy Dibera tongolo gasy vita an-trano azonao ara-bakiteny ny sakafon'ny nofiko.
Tiako hatrizay ny sakafom-bokin-maman'i Neny ka tiako ny hitazona an'io fatin-kena io ho akaiky azy araka izay tratra.
Sakafo henjana - 80/20 dia mety tsara amin'ity resipeo ity
Mofomamy sy atody - ampio amin'ny mamatotra ny mofo. Ny sakamalaho italianina dia manana zava-manitra mahafinaritra ho an'ny tsiro fanampiny.
Voasarim-bary - tongolo, persily, zava-manitra italianina ary sira sy dipay.
Fampidinana - Ity no ampahany tsara indrindra! Misimisy kokoa momba an'io etsy ambany.
Zesty. Tangy. Mamy. Mahagaga.
Mampiasako saosy sakay (tsy masiaka) sy ketchup (toy ny fanaon'i Neny foana) ary tena mitondra ity recette ity amin'ny ambaratonga manaraka.
mitono ovy mena anaty sobika famonoana
Raha mbola tsy nanana ianao saosy sakay , mila manandrana ianao! Tsy masiaka mihitsy, fa mitovy amin'ny ketchup zesty misy tsiro taonina. Ampiako amin'ny lasopy sy laoka (ary mahavariana ampiana saosy bbq ho an'ny Taolan-tehezana Barbecue )
Manao ny Meatloaf tsara indrindra
Meatloaf dia tsy sarotra atao fa misy ny olana iraisan'ny mpivady.
Malemy sy malefaka: Ny fihoaram-pefy dia hahatonga ny sakafonao ho lasa matevina ka ho toa henjana izy io ary tsy malefaka. Toy ny ankamaroan'ny fomba fahandro hen'omby (ao anatin'izany hamburger na henan-hena ), ny hen'omby sy ny add-ins dia tokony afangaro mandra-pahatonga azy atambatra.
Mamatotra akora: Ny atody sy ny mofomamy dia manampy mitazona ny henan'omby.
Ahoana ny fomba fanaovana Meatloaf
Meatloaf dia nanana rap ratsy tarehy taloha… izay mampalahelo ahy satria tsara izany rehefa voaomana tsara! Misy toro-hevitra vitsivitsy tokony ho fantatrao hahazoana antoka fa mivoaka matsiro sy manome tsiro tanteraka ity fomba fahandro hena ity!
Aza overmix : Afangaro mandra-pahatonga ny zavatra rehetra atambatra fotsiny. Ny fifangaroana be loatra dia hamorona mofo matevina!
Mampiasà hena matavy : Mampias hen'omby mahia (fa tsy mahia mahia). Mila tavy kely ianao ho an'ny tsiro fa tsy tianao ny milomano ao anaty menaka ka ny hen'omby mahia no safidy mety indrindra.
Ampiana tsiro sy hamandoana : Ny fampidirana zava-manitra sy fanosorana ireo sombin-mofo ao anaty ronono dia mitazona ny tsiranoka sy hena rehetra.
Mahandro amin'ny lovia fanendasana : Ny fampiasana lambam-panendasana hahandroana ny henan'omby dia manome ny vokatra tsara indrindra. Raha mahandro ao anaty lapoaly ianao dia hahazo setroka (ary tsy misy olona maniry hena henemana) ary na aiza na aiza alehan'ny fitsotsoran-drano. Mamorona mofo avy amin'ny lapoaly voaravaka foil.
Avereno ny Meatloaf : Miaraka amin'ny fomba fahandro mihinana hena, ny vokatra farany dia tokony hatsahatra raha vao mivoaka amin'ny lafaoro. Manampy amin'ny fizarana ny ranom-boankazo izany ary manome antoka fa tsy hianjera izany!
Mandra-pahoviana no mahandro hena hena
Meatloaf dia mila mahandro amin'ny 350 ° F mandritra ny 50-60 minitra (miankina amin'ny endrika / habeny). Ny fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa nandrahoina dia ny fampiasana a thermometer hena . Ny mari-pana hafanana ampidirina ao afovoany dia tokony hamaky ny mari-pana anatiny 160 ° F.
ahoana no anaovanao paiso sy crème
Etsy ambany no ahitanao ny faharetan'ny fandrahoana hena 2lb:
Mofomamy amin'ny 350 ° mandritra ny 55-65 minitra
Mofomamy amin'ny 375 ° mandritra ny 45-55 minitra
Raha misasaka ny antsasaky ny fomba fahandro ianao (na mampitombo azy) dia azonao atao ny mampiasa ny fotoana fahandro etsy ambany handrahoana amin'ny 350 ° F. Aza adino fa ny fampiasana thermometer no filanao tsara indrindra hiantohana ny hena voahandro efa masaka nefa malefaka tsara.
Mofomaso helo 1lb mandritra ny 45 minitra eo ho eo.
Mofomaso helo 2lb mandritra ny 55 minitra eo ho eo.
Mofom-pasika 3 lb mandritra ny adiny 20 minitra eo ho eo.
Alao antoka fa avelanao hipetraka mandritra ny 10-15 minitra ny fatin-kisarinao alohan'ny hanapahanao azy mba tsy hiraraka izy ary mitazona ny ranony rehetra! Tiako ny mametaka azy amin'ny alim-by alimina mba hafana hatrany eo am-pialan-tsasatra.
Azonao atao ve ny mangatsiaka ny Meatloaf?
Alohan'ny handrahoana sakafo Mba hampangatsiaka ny henan'omby alohan'ny handrahoana azy dia apetraho anaty lapoaly voahidy fonosana plastika (na mamorona mofo eo amin'ny lapoaly). Mihamangatsiaka tanteraka, asio tombo-kase tsara. Esory ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 24 ora ny hena nofo mangatsiaka manta. Mofomamy araka ny toromarika.
Aorian'ny fandrahoana Vantany vao masaka sy mangatsiaka dia ampangaroharo amin'ny vilany vita amin'ny hodi-biby ny silaka tsirairay avy ary lasa mangatsiaka, afindra amin'ny kitapo mangatsiaka. Manamora ny fakana silaka iray na maromaro hamerenana ity! Averina atsofohy ao anaty microwave na ao anaty lafaoro.
Manompo hena miaraka amin'ny mac sy fromazy aho na ovy nopotsehina sy ny pitipoà, io no sakafo hariva mahazatra indrindra. Broccoli, paty , ary karaoty samy manao lafiny mahatalanjona amin'ity recette meatloaf ity koa!
fomba fahandro rotel miaraka amin'ny hen'omby sy fromazy fanosotra
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafodimam-polo minitra Fotoana fitsaharana10 minitra Fotoana manontolo1 ora 10 minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity no fomba fahandro hena tsara indrindra! Mivoaka mamy isaky ny mandeha izy, ary tsy mora kokoa izany. pirinty Pin
▢¾ kapoaka ronono
▢¾ kapoaka Italiana mofomamy
▢rOA kilao Toton-kena
▢⅓ kapoaka tongolo diced
▢1 sotro saosy sakay
▢1 sotrokely Zava-manitra italiana
▢rOA tablespoons persily vaovao voatetika
▢½ kapoaka saosy sakay
▢½ kapoaka ketchup
▢rOA tablespoons siramamy volontany tsy voatery
Afanaina hatramin'ny 350 ° F ny lafaoro. Esory fonosana vita amin'ny lafaoro misy foil miaraka amina fandrahoan-tsakafo ary atokana.
Ampiasao ao anaty lovia antonony, atody, ronono ary sombin-mofo. Avelao hipetraka mandritra ny 5-10 minitra ny fangaro.
Ampio ny hen'omby, tongolo, saosy sotro 1 sotro, zava-manitra italianina, persily ary sira sy dipoavatra hanandrana. Afangaro mandra-pangaro fotsiny.
Mamorona mofo 8'x4 'amin'ny lovia fanaova voaomana. Mofomamy mandritra ny 40 minitra.
Mandritra izany dia atambatra ny saosy sakay sy ketchup (ary siramamy mena raha mampiasa). Aparitaho eo ambonin'ilay hena ny nofon-kena ary endaso mandritra ny 10-15 minitra fanampiny na mandra-masaka ary mahatratra 160 ° F.
Avelao hiala sasatra ny hena nofo mandritra ny 10 minitra alohan'ny hikosehana azy.
Kaloria:262,Karbohidraty:17h,Proteinina:28h,Tavy:7h,Tavy voky:3h,Cholesterol:112levitra,Sodium:640levitra,Potasioma:599levitra,Fibre:1h,Sugar:7h,Vitamina A:415IU,Vitamina C:5.8levitra,Kalsioma:73levitra,Vy:3.7levitra
Teny lakilehenan'omby, henan'omby, fomba fahandro hena Mazava ho azysakafo hariva masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Favorite Sakafo Fampiononana bebe kokoa
Spaghetti sy Meatballs - Ankafizin'ny ankohonana
Taolan-tehezana fohy vita amin'ny hen'omby
Ground Beef Stroganoff (Hamburger) - Haingana sy mora!
Recipe Pie an'ny mpiandry ondry
Mushroom Salisbury Steak - hen'omby amin'ny gravy holatra matsiro
Voahandro amam-borona Mississippi
Lasagna an-trano mora